musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Akanakisa muIndasitiri anoremekedzwa paWTM London
WTM London yakadoma gore rino World Travel Leaders, kucherechedzwa kwepagore kwemakambani uye vanhu kubva pasirese vakave nemhedzisiro yakanaka kune yakati dunhu kana chikamu.
Vakahwina mubairo weWorld Travel Leader vakahwina nhasi (1 Mbudzi) kuWTM London 2021.
Mharidzo yemubairo ichavepo kuti utarise painodiwa kubva 1 Mbudzi pawebhusaiti yeWTM London, nevakunda vakaburitswa kuburikidza nebvunzurudzo chaiyo.
Vemabhizimisi vakadomwa kuti vawane mibairo iyi neWTM Official Media Partners, boka remasangano anotungamira pasi rose ekutengeserana enhau. Nyanzvi dzeindasitiri nevakuru veWTM vakadzidza zvinyorwa kuti vasarudze kuti ndevapi vachakunda.
Maitiro ekubudirira aive akakosha madingindira egore rino WTM London: Reconnect. Vakazve. Innovate.
Vakahwina vakasiyana kubva kumasangano ekutengeserana uye kutungamira maindasitiri vanhu kuenda kumacheni emahotera uye mitsara yerwendo.
Akahwina kubva kune vakadomwa akaiswa pamberi neCanadian Travel Press - bhuku rekuCanada rinonyanya kuverenga rakaverengwa - raive Association of Canadian Travel Agencies (ACTA).
ACTA yakakurumidza kutsigira vafambisi vekufambisa apo Canada yakashandisa zvimwe zvirambidzo zvemuganho zvakanyanya pasirese pakati pedenda.
Sangano iri rakashanda nevamwe vane chekuita neindasitiri yekufambisa uye yekushanya kuti vakumbire kuvhurwazve kwakachengeteka kwemiganhu.
Yakakurudzirawo uye ikahwina mushandirapamwe wayo wekomisheni yevamiriri vekufamba kuti ichengetedzwe apo hurumende yeCanada yakaraira kudzoserwa kwevatengi sechikamu chemapaketi ayo ekubatsira zvemari kumakambani endege eCanada nemabasa avo ekushanya.
Kambani yekutungamira mahotera Felix Hotels ndiyo yakahwina kubva kune vakadomwa vakaiswa pamberi neL'Agenzia di Viaggi yekuItaly.
Yakavambwa nemabhizinesi maviri eSardinian, Agostino Cicalò naPaolo Manca, yakaita debut yayo muna Gumiguru 2020 kunyangwe denda ririkuitika.
Iko zvino inopa mahotera manomwe uye pekugara munzvimbo dzinotsvakwa dzezororo muSardinia.
Chirongwa chekushambadzira chakatangwa muna Chikumi munyika nhanhatu: UK, Germany, Holland, France, Switzerland neItaly.
Akahwina kubva kune vakadomwa akaiswa pamberi neTrav Talk India - magazini yeSouth Asia inotungamira yekutengeserana nhau - yaive Waxpol Hotels & Resorts.
Yakamisa boka revashandi reCovid kuti ribatsire zvikwata zvaro kuti zvigare zvakachengeteka, zvichipa mukana wekurapwa kana zvichidikanwa, uye nekuwedzera imwe rutsigiro rwemari. Pakange pasina kudzingwa basa kana kuderedzwa kwemuhoro.
Kambani iyi yakatsigirawo zvikoro zvemuno nekuwanisa vanasikana zvimbuzi zvakasiyana; madhesiki nezvigaro zvemakirasi; raibhurari uye zvivako zvemitambo; masikirini ane internet yekubatanidza kune dzidzo yedhijitari; uye midziyo yekutamba.
Uyezve, yakashanda nevamwe muindasitiri kugadzira Covid-19 nhungamiro uye kudzidziswa kwekugara, misasa, nzvimbo dzekutandarira uye mahotera.
Akahwina kubva kune vakadomwa vakaiswa pamberi neHosteltur aive Viajes El Corte Ingles, imwe yematanho makuru emasangano ekufambisa akatarisana muSpain.
Ese kana mazhinji emasangano ayo ekufambisa akavharwa panguva yekuvhara, saka mutengo wakaderera neanenge 89%.
Yakasimudzira kupa Omni chiteshi sevhisi, kugadzira nzira dzekushandira vatengi online uye parunhare.
Iyo zvakare yakabatanidzwa neSpanish online yekufambisa agency Logisiifamba, kutanga kambani yakabatana ine zvitoro zvinopfuura 500 uye vashandi vanopfuura zviuru zvishanu, "kugadzira boka revashanyi rinozviisa semutungamiri wemasangano ekufambisa anotaura chiSpanish".
Iyo agency yakagadzira zvakare tekinoroji yekutarisira zvirinani nzendo dzebhizinesi.
Richard Fain, Chief Executive uye Sachigaro, Royal Caribbean Group, ndiye akahwina kubva kune vakadomwa vakamisikidzwa neTravel Weekly US.
Kunyange indasitiri yezvikepe yeUS yairambidzwa kushanda nehurumende kwerinopfuura gore, Fain akaramba achikurukura nevamiriri vekufambisa kuburikidza nemavhidhiyo anokurudzira, emunhu, akatorwa mubindu rake nemukadzi wake.
Hofori yerwendo yakapawo madhora miriyoni makumi mana emadhora muzvikwereti zvisina mubereko kumasangano ekufambisa uye yakabatana neNorway Cruise Line Holdings kugadzira iyo Healthy Sail Panel, boka renyanzvi dzehutano nehutsanana iro rakauya nemazano makumi manomwe nemana ekuti rwendo rwunotanga sei.
Akahwina kubva kune vakadomwa vakaiswa pamberi neTravel & Tourism News (TTN) Middle East aive Shurooq, iyo Sharjah Investment uye Development Authority.
Kwemakore maviri apfuura yakatarisira kupedzwa kwemapurojekiti akati wandei sezvo Sharjah inosiyanisa hupfumi hwayo uye inovandudza eco-kushanya uye nzira dzekufamba dzeshando.
Mapurojekiti aya anosanganisira kuvakwa patsva kweKalba senzvimbo yekushanya eco-tourism; uye nzira dzekufamba netsoka uye nzvimbo yekuona paKhorfakkan; uye itsva glamping resort inonzi The Moon Retreat.
Ngarava itsva uye magwaro ekuchengetedza zvaive zvinhu zvakakosha mukubudirira kweMSC Cruises, akahwina kubva kune vakadomwa akaiswa pamberi neTTG Media UK.
Yakatangwa panguva yedenda, MSC Virtuosa neMSC Seaside vakapa rwendo rwechikepe mukana wekuchengetedza kufara kwakatenderedza mhando uye kuisa pamberi mameseji ekusimudzira.
Zvikepe zviviri zvinoratidzira tekinoroji yekucheka utsi; shore-to-ship power connectivity, zvichivabvumira kuti vabatane nemagetsi emagetsi emunharaunda pavanenge vari pazviteshi; uye kusimukira kwesimba rinoshanda kubatsira MSC Cruises kusvika kune chinangwa chayo che2.5% gore-pa-gore-pa-gore-pa-gore rekudzikisa mafuta.
Akahwina kubva kune vakadomwa akaiswa pamberi nemuparidzi weRussia Tourbus aive Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi.
Iyo yekutandarira ndiyo yakanakira nzvimbo yekuongorora iyo yeRussia Riviera, ichipa maonero egungwa nemakomo kubva kumakamuri 508 uye matanhatu villas.
Iri muOlympic park uye iine jecha pamhenderekedzo yegungwa, hotera yacho ine zviitiko zvebhizinesi pamwe nevafambi vekutandara.
Inosimudzira kushanya kwezvakatipoteredza uye kwakasimba, kutsigira kuchengetedzwa kweGungwa Dzvuku uye Makomo eCaucasus.
Akahwina kubva kune vakadomwa vakaiswa pamberi naMercado & Eventos muBrazil aive Bruno Wendling, Mutungamiriri weMato Grosso do Sul Tourism Foundation uye Mutungamiriri weBrazilian Tourism Secretary Forum (Fornatur).
Akakumbira vezvematongerwo enyika kuti vawane mitemo uye rutsigiro rwemari kubatsira chikamu chekufambisa.
Matanho aakaita anosanganisira mushandirapamwe unonzi 'Welcome, but wearing a mask'; kudzidziswa kwezvigadzirwa zvitsva uye tekinoroji mhinduro; uye madhiraivha ekushambadzira.
Iye akahwina kubva kune vakadomwa akaiswa pamberi neUK's B2B tekinoroji kudhindwa, Travolution, yaive yepasirese yekufambisa manejimendi chikuva TravelPerk, yekuvandudza kwayo TravelSafe API.
Izvi zvinobvumira vanopa mafambiro kuti vape vatengi ruzivo rwenguva-chaiyo paCovid-19 zvirambidzo zvekufamba, zvinosanganisira point-to-point ruzivo rwekufamba, magwaro ekufambisa, nhanho dzekutapurirana dzedunhu, gwara remunharaunda, matanho ekuchengetedza ndege nezvimwe.
Mukuru weWTM London, Simon Press, akati:
“Nzvimbo yepasi rose yeWTM yevashandi vezvenhau vari kusangana zuva nezuva nenyanzvi dzekufambisa uye dzekushanya muchikamu chedu. Kuziva kwavo kwedunhu nekubatana kunoreva kuti vakundi veWorld Travel Leaders vanomiririra zvemhando yepamusoro muindasitiri yedu.
"Takafadzwa zvikuru nemafambisirwo akaitwa mafemu ekufambisa nemafambisirwo pasi rese nekukurumidza uye nehungwaru kumatambudziko asina kumboitika edenda uye maitiro avanoita motto yedu yeReconnect. Vakazve. Innovate.”